A Ukushisa pad for imilenze ngenkuthalo esetshenziswa izindlu eziningi ezweni, emotweni noma ngisho ekhaya. Yiziphi izinzuzo ezibaluleke kakhulu amadivaysi ngenhla? A ezahlukene isicelo, lula ukusetshenziswa kanye nokwethembeka. Futhi, kukhona izikhwama esikhethekile ukufudumala izinyawo. Mayelana izici lezi amadivaysi, funda ku.
Incazelo emfishane imikhiqizo engenhla
Le divayisi ekhiqizwa ngesisekelo Ukushisa isici amazwe. ukukhiqizwa yayo esebenzisa ngezinto eziqinile - ukupheda polyester polycotton.
Kuyaphawuleka ukuthi kagesi Ukushisa pads nemilenze kungenziwa ifakwe ekhethekile multi-isikhundla inkinobho.
Ngaphakathi kulo mgqomo wakhona ufudumele lokushisa limiter ekhethekile. Lokhu kusho ukuthi uma izinga lokushisa ifinyelela inkomba osithandayo, idivayisi ngeke ngokuzenzakalelayo shaqa.
Izinzuzo esemqoka apharathasi ngenhla
Umsebenzi oyinhloko Ukushisa pads - Amalahle izinyawo wobuntu. Ingasetshenziselwa ukuze kulondolozwe izinga lokushisa ethile noma esheshayo ukuhlala efudumele emva lwaluyophola.
Izinzuzo esemqoka apharathasi ngenhla:
it is esakhiwe ngezinto zemvelo kuphela;
kudle amandla sakugcina;
ukushisa ukhululekile futhi ephephile kungaba khulula ukujabulela amahora mayelana 8. Okulingene lokushisa Ukushisa - 40-45 degrees Celsius.
A Ukushisa pad for imilenze Beurer
Lokhu umkhiqizi unikeza anhlobonhlobo amadivaysi ngenhla.
Beurer inkampani enobunikazi ubuchwepheshe eliyingqayizivele imikhiqizo yayo kagesi, okuyinto evimbela okweqile zezinyawo. Esimeni ukungasebenzi, inzwa uhlelo kwabangela kweso, futhi Ukushisa pad for imilenze Beurer zikhutshaziwe ngokuzenzakalelayo. Kuyinto ngokusebenzisa le yibhange ezingeni eziphakeme zokulondeka.
Ngaphezu kwalokho, abantu bangakhetha ngokwabo izinga lokushisa evumayo kakhulu ngaphandle kwezinkinga.
Yonke imikhiqizo yalesi umakhi has ezifanele izitifiketi izinga.
Electric Ukushisa pads sezinyawo nge massage vibratory lenkampani Beurer
Lezi amadivayisi angekho omkhulu kuphela ukuxoxa izinyawo, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi afeze massage yabo.
A Ukushisa pad for imilenze Beurer FWM40 ukufeza kahle izinto ngenhla. massage Vibratory ephumula imilenze ukhathele, unciphise ukucindezeleka futhi ubuyisele kwegazi.
A Ukushisa pad for imilenze nge massage kamakhi ngenhla inikeza izici ezilandelayo:
It has amazinga ezimbili massage (kuyaqabula futhi kuzolise);
massage ukushisa futhi zisetshenziswa ngokuzimela komunye nomunye;
kanokusho ulwelwesi umshini washable;
kakhulu izinyawo emikhulu;
amandla - 16 kW.
Iziyalezo usebenzisa isikhwama ukufudumala sezinyawo
Ngaphambi kokusebenzisa izinhlelo ezikulolu cingo, ochwepheshe ukweluleka, kudingeka ufunde ngokucophelela umehluko wemisindo nemiqondo yamagama eziyisisekelo ukusetshenziswa kwalo. nomkhiqizi ngamunye angase athile izongezo iyawabopha ekusebenzeni umshini othile.
Ngakho, i-emfushane imfundo manual:
iphakethe engaphandle evulekile, ukuze uthole iyunithi futhi shisisa ke angu-10.
Ivikela isikhwama paper isuswe futhi ethe njo ubuso phansi Sock (ngaphansi iminwe). Akunakusetshenziswa idivayisi ngenhla akufanele ibekwe phezu ngezinyawo, ibhola ahlangene noma igobela le unyawo.
Kufutfumeta amaphakethe yakhelwe ukusebenza ngaphakathi amabhuzu noma izicathulo. Kuhle Imiphumela ukunikeza amasokisi obukhulu.
Nhlobo ukusebenzisa kudivayisi wathi ngqo isikhumba izinyawo. Ukuvula isikhwama nayo Kunconywa. Gcina kufanele kube kude ingane yakho.
Izici warmers isicelo sogrevatelnyh izikhwama umlenze kagesi
A Ukushisa pad for imilenze (amabhuzu kagesi) kudinga okusingathwa. Into yokuqala okumele khumbula ukuthi idivayisi phezulu ngaphambi ukusetshenziswa kudinga preheating cishe imizuzu engu-10 futhi.
Ejwayelekile heater Umlenze iphakethe ukufudumala ezincane ngaphakathi kwe-okuyizinto zingxenye ezilandelayo:
yensimbi yaba luthuli;
Omunye iphakheji ngokuvamile iqukethe 10 namabhuzu warmers ezinjalo.
Kwembulunga izikhwama ayikwazi wafaka izicathulo. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukushisa abandayo neze wazizwa ngenhla kudivayisi. Futhi, yebo, ungalindeli umphumela ohangulayo. Ukufudumala Foot izenzo kancane - kukhona Ukushisa mnene futhi kancane kakhulu.
The main imfuneko for ukusebenza evamile zedivayisi ngenhla - ukufinyelela okusheshayo ke umoya-mpilo. It kuvela ukuthi izicathulo Friend, uma kakhulu ucindezele Ukushisa pad ukuba imilenze, ngeke kube umphumela ukufudumala. Uma kungekho i-oksijini khulula ezinjalo "esikhwameni" maduzane selehlile. Izoqhubeka umsebenzi walo kuphela uma amnike ithuba "ukuphefumula" umoya-mpilo.
Ngokuphathelene Ukushisa pads, lapha kukhona eminye caveats. Ochwepheshe ukweluleka hhayi ukushiya ivuliwe uma ufuna izingane zakho eseduze. Akubalulekile ukuyisebenzisa umuntu nezibi, uma wahlala yedwa ekhaya. isikhathi eside ukuyisebenzisa futhi engathandeki. Isicelo esinjalo esihleliwe amadivayisi ngenhla kungadala izinguquko emzimbeni. Njengoba ngisho kancane ukupholisa umuntu eba ezwelayo, futhi liholela njalo imikhuhlane izifo.
Ochwepheshe baxwayisa ngokuthi usebenzise oshiwo ngenhla bafudumale electric pad for ekwelapheni ukushisa Kunconywa kuphela emva kokubonisana udokotela wakho.
A Ukushisa pad for imilenze: Izibuyekezo
abathengi Ngenelisekile wathi kudivayisi ngokuthi "isimangaliso." Abathengi uqaphele ukuthi Ukushisa pad kuyabasiza engaphezu kweyodwa ebusika. Kungaba akhanyiswe ngokukhululekile lapho izinyawo Bamanzi, amakhaza futhi uma uhlangabezana izimpawu komkhuhlane.
Ikakhulukazi eziningi Izibuyekezo mayelana nale divayisi, esesikhundleni, ngaphezu Ukushisa umsebenzi, futhi umsebenzi massage unyawo.
Kuyaziwa ukuthi izinyawo zabantu amaphuzu amaningi asebenzayo. Ngakho, abathengi bathi heater kagesi nge massage vibratory kahle aqede ukucindezeleka nokukhathala kuzipha. Izindaba ezinhle, ngokuvumelana kubo, ukuthi Ukushisa massage isebenze ngamunye.
Abathengi kwesokunxele Izibuyekezo eziningana, ezinganikwa ezinye bathi ukusetshenziswa ashisayo lamanzi nje ngokwanele (zonke etholakala imiyalelo), kanye lo mkhiqizo ayidingi ukunakekelwa okukhethekile.
A Ukushisa pad for imilenze - ukutholakala yangempela ebusika ezinyaweni zethu. izimo ukhululekile for the izinyawo anikezwa at 100%.
Shaver Panasonic ES-6003: Ukucaciswa, imiyalelo, ukubuyekezwa
Cushion Antidecubital: izinhlobo, kanjani ukukhetha, ukubuyekezwa
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo "Zippy" - induduzo izinga
Ukulinganiswa Platelet. Amazinga abantwana, abadala kanye nabesifazane abakhulelwe.
Hypotension noma underpressure
Germany - zwe elikhulu kunawo wonke e-Western Europe: Esikhathini Esidlule Nanamuhla
Umhlaba wokulima: ukudayiswa, yerenti, ukudluliswa kwezindlu zangasese, izindleko izintela, kuvunyelwe ukusetshenziswa futhi isakhiwo